Adeegsiga Telegram-ka terminal-ka | Laga soo bilaabo Linux
Adoo adeegsanaya Telegram-ka boostada
Waxay yihiin Link | | La cusboonaysiiyay 24/02/2014 10:31 | Aplicaciones, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waqtigaan la joogo, hubaal in badan oo idinka mid ah ayaa maqlay oo / ama wax ka akhriyay telegraam, nidaamka fariimaha cusub ee la tartamaya meel kasta (iyo meel aan aamin ahayn) Whatsapp.
Waxaad sidoo kale ogaan doontaa inay tahay Software Bilaash ah iyo in barnaamijka iyo API-keeduba ay lacag la’aan yihiin (marka laga reebo serverka, in kastoo ay u muuqato inay iyadana sii deyn karto)
Maqaalkan waxaan ku sharixi doonaa talaabooyinka la raacayo si loo rakibo loona isticmaalo macmiilka terminaalka, kaas oo wali socda horumarkiisa, laakiin aan u isticmaali karno dhib la'aan badan.
Haddii aad isticmaaleysid archlinux ama derivas waad ka rakibi kartaa AUR xirmo telegram-git, sidaa darteed waad ka boodi kartaa tallaabadan. Bakhaarka barnaamijka ka sokow waxaad ka heli kartaa xirmo rpm, iyo sidoo kale in la soo saaro xirmo loogu talagalay Gentoo, Debian iyo sooyaal.
Si loo soo ururiyo waxaan u baahan doonaa xirmooyinka soo socda (marka laga reebo GCC, gawaarida gawaarida lagu rakibo iyo kuwa kale):
Qaar ka mid ah distros, sida Debian ama Ubuntu, openssl waa sida libssl. Ka sokow, xusuusnow inaad rakibtid maktabadaha ku dhammaanaya -Dev o -sameyn.
Marka ku-tiirsanaanta la rakibo, waxaan fureynaa terminal waxaanna u dhaqaaqeynaa galka halka aan ku xiraneyno keydka:
Hadda waxaan u dhaqaaqeynaa galka cusub ee la abuuray, tg, oo waxaan fulinnaa:
Haddii aysan waxba dhicin, waxaan heli doonnaa barnaamijka.
Si loo tijaabiyo waxaan fulinaa:
Waxaan heli doonaa shaashad sidan oo kale ah oo na weydiineysa lambarka taleefankeena si aad noogu soo dirto farriin leh lambarka xaqiijinta:
Marka koodhka la galo, waxaan isticmaali karnaa macmiilka.
Waxay sidoo kale leedahay dhammaystirid, amarrada iyo xiriirada labadaba:
Gudaha galka ~ / .telegram macaamilka qaabeynta ayaa la keydiyaa, marka lagu daro galka ay ku badbaadi doonaan sawirada, fiidiyowyada, iwm.
Amarrada aasaasiga ah:
msg: Waxaan fariin u diraynaa mid ka mid ah dadka aan la xiriirno
send_photo / video / text: Waxaan u dirnaa sawir, muuqaal ama feyl qoraal ah
create_secret_chat: Waxaan ku abuureynaa sheeko qarsoodi ah xiriirka lala tilmaamay
add_contact: Isku day inaad ku darto xiriir tilmaamaya lambarka taleefankooda
Kuwani waa qaar ka mid ah amarrada la heli karo. Si aad u ogaato inta kale, qor qor caawimaad.
Macaamilka, xitaa marxaladda hore, waa mid aad u fiican, haddii aad taqaanid sida loola macaamilo terminaalka. Qodobka xun ee xilligan jira ayaa ah in la soo degsado waxa ay noo soo diraan waa lagama maarmaan in gacanta lagu sameeyo, iyadoo sidoo kale la ogyahay ciladda farriinta. Tani waxaan u fulineynaa amarka:
oo markasta oo aan dirno ama helno farriin waxaan heli doonnaa lambarka aqoonsiga ee farriinta.
Waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto, adiga oo sugaya macmiil garaaf ah inuu u soo baxo kuwa aan dooneynin inay isticmaalaan terminaalka, ama aan u baran isticmaalkiisa.
Ma jiro interface garaaf ah HOOYO loogu talagalay GNU / Linux. Haddii aad rabto inaad isticmaasho muuqaal garaaf ah, waxaad leedahay Webbogram si aad uga isticmaasho a barta internetka. Fadlan, mar dambe maad weydiin mawduuca, isla marka uu mid soo baxoba, waa laga hadli doonaa. Waad ku mahadsantahay fahamkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Adoo adeegsanaya Telegram-ka boostada
Haye, Telegram waa cajiib, waa tan ugu fiicneyd ee aan abid tijaabiyo.
Laakiin waa wax laga naxo in loo isticmaalo iyada oo loo marayo terminaal iyadoo leh interface fiican oo ku yaal daaqadaha sidaa darteed waxaan rajeynayaa inay sii daayaan GUI sida ugu dhakhsaha badan.
In kasta oo uusan jirin GUI asal ahaan u leh GNU / Linux waxaan isticmaali karnaa Webogram »
Ku jawaab al_SeveR
Sida muuqata haddii uu jiro interface ka mid ah Linux https://github.com/vysheng/tg
Ragga, haddii aad si fiican u hubiso gelitaanka waxaad arki doontaa in xiriiriyeyaasha ay tilmaamayaan keydkaas XD
Qof aan u baran xarunta, waa wax iska caadi ah.
Wixii ku saabsan Webogram, mar baan isku dayay, laakiin waa inaad taleefankaaga dhigtaa markasta oo aad soo gasho.
Haddii aqoonteyda barnaamij (iyo Ingiriisiga) ay ka sareeyaan, laga yaabee inaan xitaa naftayda ku dhiirigaliyo inaan sameeyo
Waxaa lagu rakibi karaa barnaamijka 'chrome / chromium App' sidaasna uma baahnid inaad dib u soo gasho lambarka taleefanka, iyo sidoo kale (ugu yaraan aniga Gnome 3.10) uma baahnid inaad si cad u furto biraawsarka si aad u bilowdo .
Chrome / Chromium? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA… kahor Iexplorer!
Maxay tahay sababta loogu silcayaa mashiinka bixiya adeegga aan faaiidada lahayn ee Trern ee Isticmaalaha?
Waxaan kaliya tilmaamay in ikhtiyaarkan uu jiro. Haddii aad doorbideyso inaad isticmaasho IE, horay u soco. Laakiin sidaan ogahay maahan mid ka jira GNU / Linux waana waxa aan ka hadlayno.
Maya, maahan inaad taleefanka dhigtid markasta oo aad soo gasho. Waxaan u maleynayaa inay u isticmaasho buskud leh waqti dhicitaan aad u sareeya oo kani ah, waxaan isticmaalayay Webogram dhowr toddobaad waxaana mar kaliya dhigay lambarka taleefankayga. Waxaa laga yaabaa inaad tirtirto taariikhda daalacashadaada iyo cookies.
Dhawaan waxaan aqriyay casharro si wathsapp looga isticmaalo pidgin,
Ma jirtaa qaab lagu isticmaalo telegram-ka pidgin? habsiin!
Ku soo jawaab matias
Hagaag waqtigaan maya, dabcan waxba kamaan helin, laakiin way fiicnaan lahayd.
Telegram Weyn, laakiin sida Fylux sheegay waa inay ku hirgeliyaan istiraatiijiyad muuqaal ah Linux! Dhinaca kale, waxa aanan jeclayn ayaa ah in mid uun ka mid ah dhammaan ila xidhiidhayaashu ay adeegsadaan.
Laakiin taasi waa arrin la faafinayo oo haddii aad awoodid, shaqsi ahaan u samee, maxaa yeelay dhammaanteen waan ognahay in caajisnimadu ay tahay sababta keentay in dalab aan ammaan ahayn iyo lahaansho lahaansho ay u sii socoto si aad u guuleysata Qaar ka mid ah asxaabteyda iyo aniga waxaan khiyaanaynay dhamaan asxaabteena muhiimka ah ee aan lahadalnay si aan u soo dajino iminkana waxaan leenahay xiriiro aad u yar. Waxa aanad sugi karin ayaa ah in qof wali ah oo samada ka soo degaa uu u sheego inay rakibaan.
Hal su'aal, xakamaynta c ma ka baxaysaa? xD
Ma jirtaa hab lagu abuuro akoon telegram oo aan la siinin lambarka moobaylka?
Waxaan isku dayay inaan koonto ka sameysto macmiil desktop ah waxayna weydiisataa mobiil, barnaamijka ku jira google play sidoo kale ma weydiistaa?
Ma garanayo laakiin wax kasta oo taleefan lambar i weydiista waxay i siisaa kalsooni darro: /
Haddii ay tahay codsi adeegsanaya lambarka taleefankaaga si aad u abuurto wada hadal aad la yeelatid dadka aad la xiriirto, waxa ugu yar ee uu u baahan yahay wuxuu noqon doonaa lambarkaaga gacanta, si la mid ah khadka, whatsapp, chat, iwm iyaguna way ku waydiinayaan. Haddii aad rabto inaad ka dhigto mid si fiican u shaqeynaya, marka hore ku rakib mobilka maxaa yeelay haddii kale waxay u badan tahay in markaad bilowdo inaadan wax xiriir ah yeelan doonin.
Anigu midna kuma haysto sabab la mid ah, ma garanayo ... kaliya ma jecli inaan bixiyo nambarka.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, maadaama aan doorbidayo in aan ahaado "meel aan lagaran" 😛
Burushka Fowdada dijo
Telegram wuxuu kaloo adeegsadaa naanays si uu xiriir uga dhexeeyo dadka isticmaala inkasta oo uusan qasab ahayn, runtiina waxay noqonaysaa mid si fiican suurtogal u ah in la abuuro koonto ku saleysan naanaysta oo aan lahayn lambar taleefan oo la xiriira, si fudud adigoo raadinaya xiriiradaada naaneys ee raadinta adduunka.
Ka jawaab Bushels fowdo
Dhibaatooyin ayaan ku qabaa ku tiirsanaanta libconfing
Ku jawaab juanpa
Fadlan ha sii wadin inaad siiso Telegram magac. Ma aha wax ka badan dabin kale sida WhatsApp oo kale. Xaqiiqda ah inay tahay isha furan waa uun istaraatiijiyad ay dadku ku aaminaan inay tahay mid la isku halleyn karo marka xaqiiqda koodhka dhinaca server-ku lahaado, waxay isticmaashaa borotokool xidhan oo aan ahayn heerka XMPP, khubarada amniga ayaa ogaaday in algorithm-keeda sirta ah ay tahay waa isla rand ay isticmaasho NSA. Intaa waxaa dheer, abuuraheeda wuxuu la mid yahay VKontakte, shabakadda bulshada ee Ruushka oo u baahan lambarka taleefankaaga inuu isticmaalo.
waxaa la joogaa waqtigii aan kor u qaadi lahayn adeegsiga shabakadaha bilaashka ah iyo borotokoolka bilaashka ah / federaaliga ah ee XMPP / Jabber.
Openwengo wuxuu XMPP u adeegsaday shirarka fiidiyaha. Waxay ahayd isku dhufasho badan oo tayo leh ugu yaraan waqtigeeda, laakiin maadaama ku dhowaad qof walba saaxiibbadiis uu ku lahaa msn, waxay xirtay chiriguito dhawr sano ka dib. Google waxay umuuqatay hadii Hadalku usocdo XMPP, laakiin had iyo jeer wuxuu kudhowaa inuu dilo heerarka furan ee uu kabilaabanayo, kiiskan Hangouts.
Tan ugu xunna waxay tahay innaga oo aan Linuxeros waxba ka qaban. Waxaan aaminsanahay inay tahay waqtigii kor loo qaadi lahaa adeegsiga XMPP ee isgaarsiinta bilaashka ah iyo baahinta isla markaana lagu dhiirrigeliyo adeegsiga shabakadaha bulshada ee bilaashka ah sida Qurbajoogta *, Pump.io, sidee ayey suurtagal u tahay inaan u oggolaanno nidaamyada wada sheekaysiga adduunka ugu isticmaalka badan lahaansho, la xiray oo ay gacanta ku hayso shirkad in waxa kaliya ee doonaya ay tahay in si xun loola dhaqmo isticmaalaha shuruudahooda iyo shuruudaha isticmaalka?
Sida aan kor ugu qaadno isticmaalka GNU / Linux ama munaasabadaha waxaa lagu qabtaa softiweer bilaash ah, iwm. Maxaa diidaya in isla si isku mid ah loogu sameeyo halistaan ​​cusub ee ina wada xakameynaysa beryahan?
Laga soo bilaabo Linux, fadlan la soco tan.
Macaamiisha XMPP Jabber waa kuwo fool xun. Qurbajoogta waxaa ka buuxa hippi.
Qurbaha waxaa ka buuxa fowdo xd
Pidgin ma ahan wax fool xun. Damqasho waxay isku dayeysaa inaysan noqon. O_O
Taasna kaliya maahan laakiin waxaan sii wadeynaa adeegsiga iyo dhiirrigelinta isticmaalka Google, oo leh Startpage, Ixquick, Duckduckgo iyo kuwa kale; Waxaan sii wadeynaa inaan xayeysiino Gmail si bilaash ah, halkii aan kaheli laheyn adeegyada u gaarka ah arimaha khaaska ah sida Openmailbox, Autistici, iwm; Waxaan sidoo kale u qabannaa xayeysiin bilaash ah Amazon (waxay umuuqataa inaysan jirin buugaag / diiwaanno / qalab / wixii alaab ah ee dukaamada ku yaal).
Waa inaan ku sameysannaa imtixaan isdaba joog ah nafteena oo aan badalnaa caadooyin badan oo aan haba yaraatee ku habboonayn falsafadda barnaamijka bilaashka ah.
Ku jawaab Recesvinto
Waad saxan tahay, laakiin waxaad taqaanaa qof leh barnaamij sheeko XMPP ah (oo aan ahayn Facebook, dabcan) moobiilkiisa, iyo koonto, dabcan. Ma yeelo Dadku waxay leeyihiin «Guasa», Line, Viber, oo joojiya tirinta. Telegram wuxuu isu soo bandhigayaa sida boqol loogu talagalay WhatsApp, gudahoodana ma ahan mid kaamil ah, aad ayuu uga liitaa WS. Markaa waa wax aad u wanaagsan in dhexdeenna aan isku dayno inaan adeegsanno waxyaabo kale, laakiin maahan inaan luminno xiriirka aan la leenahay xaqiiqda oo aan aqbalno in saaxiibbadeen aysan rakibayn oo aan u habeynaynin XMPP koontada iyo macmiilka kaliya inay nala hadlaan, sidaa darteed maahan Ma jiro wax la kala doorto oo aan ahayn in la isticmaalo beddelka ugu xun, taasna, hadda, waa Telegram.
Waxaan u maleynayaa in qof uu ka shaqeynayo CLI si uu u sameeyo dhamaadka hore, sax? Waa lagama maarmaan! Waxaan u arkaa wax la yaab leh in macmiil Linux ah oo u dhashay uusan wali soo bixin. Ma jiri doonaa shaki badan oo Telegram ku ah bulshada dhexdeeda? Ma filayo. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku arko Telegram-ka KDE-Telepathy tusaale ahaan 😛
Soo booqde dijo
Waxay umuuqataa in mashruuc horayba loogu bilaabay dareenkaas:
Jawabi Soo Booqdaha
Tabaruc aad u fiican!
Mahadsanid saaxiib, isla markiiba way ii shaqaysay. Ilaa hada barnaamijku si wanaagsan buu u socdaa.
Waxaan ku rakibey macmiilka daaqadaha khamri ku jira lynklint 16 wuxuuna u shaqeeyaa si aad u wanaagsan, waxaan u leeyahay kuwa xiiseynaya GUI ee Linux
Ku jawaab xuri
Farxad ayey noqon laheyd hadii loo isticmaali lahaa pidgin-ka xmpp 🙂
Terminalka ayaa aad uga dhakhso badan, waxaan jeclahay barnaamijyo badan oo aan ka wadi karno khadka taliska, waxaan kuugu mahadcelinayaa casharka oo aad u dhameystiran.
Waa salaaman tahay qoraal aad u wanaagsan, laakiin waxaan doonayay inaan sii dheeraado. Waxaan jeclaan lahaa inaad sharaxaad ka bixiso sida aad ugu maamuli karto nooca Telegram-ka linux laakiin jawi garaafsan oo ku jira barnaamijka telegram-ka https://telegram.org/apps waxaa jira faylasha.
Xaaladdayda waxaa loogu talagalay OpenSuse 13.1, mana rakibi karo rpm sababtoo ah maktabad la'aan oo aanan heli karin: S
Ma jiro wax muuqaal ah oo garaaf ah oo loogu talagalay Telegram-ka GNU / Linux xilligan la joogo NATIVE. Haddii aad rabto interface garaaf ah, waa inaad isticmaashaa 2ka loo heli karo daalacayaasha shabakadda.
Marka laga hadlayo RPM, wax fikrad ah kama haysto sida loo sameeyo mid maadaama aanan waligey isticmaalin SUSE, Red Hat, iwm.
Shaki ayaan qabaa. Marka terminal-ka la xiro, markaan dib u furo, sideen mar kale u socodsiiyaa arjiga? Waan ogahay inay su'aal doqonimo noqon karto, laakiin ma garanayo sida loo sameeyo. Aad baad u mahadsantahay!
Ku soo jawaab Nop
$ ./ telegram
Nooca Telegram-macmiilka 0.01-beta, Xuquuqda daabacaadda (C) 2013 Vitaly Valtman
Telegram-macmiilku wuxuu la yimaadaa ABSOLUTELY NO WARRANTY; wixii faahfaahin ah nooca 'show_license'.
Kani waa barnaamij bilaash ah, waana lagusoo dhaweynayaa inaad dib u qaybiso
xaaladaha qaarkood; ku qor `` show_license '' wixii faahfaahin ah.
*** Xiriir lumay server… 31.210.235.12:80
*** Xiriir lumay server… 31.210.235.12:25
Tag galkaaga shaqsiyeed, taabo Ctrl + H, oo tirtir faylka .Telegram. Ka taxaddar, ha tirtirin wax kale.
Waa inaad sameysaa markasta oo aad rabto inaad socodsiiso arjiga. Oo dib-ugu-xaqiiji SMS-ka. Xanuun baa dabada ku haya.
Taasi maahan wax loo baahdo, maalin walba waan socodsiiyaa mana ahan inaan tirtiro galkaas gabi ahaanba, marka laga reebo hal mar oo dhowr isbedel ah oo la sameeyay oo ay lagama maarmaan noqotay.
Waxaa laga yaabaa inaan loo baahnayn kiiskaaga. Aniga tayda, haa. Marwalba oo aan arjiga bilaabo, qaladkaa wuu i siiyaa waxaanan xaliyaa kaliya markaan tirtiro galka .Telegram-ka ...
waxa dhacay waxay ahayd in adeegu uu hoos udhacay oo si qumman ayuu u shaqeeyaa looma baahnin inaan taabto wax lamid ah gracais
Waa WhatsApp, waxaad si qaldan ugu qortay maqaalka. Haa, waa la horumarin kari lahaa. Hal cillad ayaa ah in aysan ogolaaneyn in la diro iyada oo loo marayo send_audio maxaa yeelay shaqadani ma ahan mid awood u leh in lagu farsameeyo meelaha magacyada feylasha, sida tusaalayaasha aan hoos ku soo bandhigi doono:
Tani ma shaqeynayso
"Tani sidoo kale ma shaqeynayso"
\_ »Tani midna \_»
Ku jawaab mankeletor
Aan isku dayno Thanks !!! 🙂
Waxaan u maleynayaa in ilaha lagama maarmaanka ah aysan dhameystirneyn, ma garanayo meel aan ka helo
«Si loo soo ururiyo waxaan u baahan doonaa xirmooyinka soo socda (marka laga reebo GCC, gawaarida waaweyn iyo kuwa kale):
Dhammaan waxa ku jira bakhaarrada Ubuntu sidaa darteed waa inaad ka raadsataa maareeyaha xirmada.
Boggan waxay kuu sheegayaan tallaabooyinka la raacayo si loo soo ururiyo ayuu yiri distro
Magacyada xirmooyinka badanaa way kala duwan yihiin iyo / ama waa inaad rakibataa xirmooyin ku dhammaanaya -dev ama -devel si loo rakibo madaxyada maktabadda si loo soo ururiyo barnaamijyada u baahan. Waxaan dhigay magacyada asalka ah si aan uga dhigo mid guud.
Tusaale ahaan Openssl-ka ku jira ArchLinux waa isku magac oo Debian, Ubuntu, Mint iyo waxyaabo kale oo la mid ah sida libssl
Aniga oo raadinaya telegram ayaan helay tan https://aur.archlinux.org/packages/arch-telegram/?setlang=es Waan rakibay waana tijaabinayaa, waxaan cadeeyay inay kujirto marxaladda alfa
Maaddaama ay suurtagal tahay in nooca garaafka uusan weli jirin. !
Ku jawaab Andrezero
Hormari. Haddii aadan sameyn, ha ku dhaleeceynin in kuwa kale aysan sameyn… 🙂
Ama uguyaraan laxiriira horumariyeyaasha Andrezero 😉 Hadaad aragto inay jiraan dad danaynaya GUI Telegram GUI oo loogu talagalay GNU / Linux, laga yaabee taasi inay sii kobcinayso horumarkaaga Telegram CLI waa mid aad u wanaagsan. Waxay la mid tahay siyaabaha qaarkood Profanity ee XMPP ee CLI ee GNU / Linux: http://www.profanity.im/index.html Gaar ahaan ikhtiyaarka ah inaad farriimaha u dirto / msg ja: http://www.profanity.im/basic.html
Waxaan kaaga tagayaa maqaal xiiso leh oo ku saabsan Pavel iyo Nikolai Durov, oo ah aasaasayaasha Telegram si ay u arkaan waxa ay sidoo kale u maleynayaan:
Salaan iyo bogaadin dhamaan bulshada oo ka dhigaysa boggan mid ka mid ah kuwa ugu fiican dhinac walba. Noolaada walaalaha Cuba sida Elav iyo KZKG ^ Gaara si ay ula wadaagaan inta kale intaan noocan ah. Isku duuban
Waxaan ilaaway inaan xuso Pablo sidoo kale aan u isticmaalno Linux oo hadda ku soo biiray From Linux. Maxaa farxad ii ah inaan ka mid noqdo beeshan weyn.
Hector Mamani dijo
Halkan waxaa laga helayaa Ubuntu 16.04 x64 GUI-kani wuxuu si fiican u shaqeeyaa https://blog.desdelinux.net/tips-para-instalar-popcorn-time-spotify-y-telegram-sobre-debian/
Hadda, weli waxaan xiiseynayaa terminal-ka si aan uga hadlo CHIP-kayga wuxuu adeegsadaa harti ku saleysan debian 8 :-D.
Weli waan ku raacsanahay faallooyinka isticmaalka qaabab kale oo aan kula xiriiro, mm laakiin maxaan ka tagnay? IRC?
Jawaab Héctor Mamani
apt-get rakibi libjansson-dev on Debian sidoo kale si ay u ururiso
Ku jawaab Cire
KillSpinners: Kordhinta Firefox ee loogu talagalay goobaha aan waligood dhammayn rarka